Hello Nepal News » कतार विश्वकप छनौट : जापानद्वारा एकै खेलमा १४ गोलको वर्षा !
कतार विश्वकप छनौट : जापानद्वारा एकै खेलमा १४ गोलको वर्षा !
अर्को वर्ष २०२२ मा कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप फुटबलका लागि जारी छनौट खेलअन्तर्गत एसियाली देश जापानले आफ्नो खेलमा १४ गोलको वर्षा गरेको छ । आज मंगलबार राति भएको पाँचौं खेलमा जापानले मंगोलियाको पोस्टमा १४ गोलको वर्षा गर्दै ०–१४ को एकपक्षीय र फराकिलो अन्तरको जित निकालेको हो । मंगोलियालाई उसकै घरेलु मैदानमा १४ गोलको भारी बोकाउँदा जापानका लागि १ जना खेलाडीले ह्याट्रिक गरे भने ३ जनाले २–२ गोल गरे । त्यसैगरी, ४ जनाले १–१ गोल गरे ।
जापानले १ गोल भने उपहारमा पाएको थियो । खेल सुरु भएको १३औं मिनेटबाट गोल गर्न थालेको जापानले ९३औं मिनेटमा पुग्दा १४ गोल ठोक्यो । ९० मिनेटपछिको इन्जुरी समयमा मात्रै जापानले ९१औं, ९२औं र ९३औं मिनेटमा गरेर लगातार ३ गोल गरेको थियो । उसले सबैभन्दा थोरै गोल यही ३ मिनेटमा ३ गोल गरेको थियो । जापानका लागि कूल ८ जना खेलाडीले गोल गरेका थिए ।
मंगोलियामाथि जापान यतिसम्म हाबी भयो कि, उसले खेलभरिमा जम्मा ३४ पटक आक्रमण बुन्दा २५ प्रहार त अन टार्गेट गरेको थियो । उसले ८० प्रतिशत बल आफ्नो पक्षमा राख्दा ७३४ पास खेलेको थियो । यता, घरेलु टोली मंगोलियाले भने खेलभरिमा मात्रै २ पटक आक्रमण बुन्दा कुनै पनि प्रहार अन टार्गेट थिएन । पूराका पूरा जापानले कब्जा गरेको खेलमा उसले मंगोलियोलाई एकदमै निरीह पाराले हरायो । गोल टेबल तेल हेरौं–
जापान अहिले यस क्षेत्रबाट दोस्रो राउन्डको छनौट खेल खेलिरहेको छ । ऊ समूह ‘एफ’मा छ । उसले हालसम्म आफ्नो समूहमा खेलेका ५ वटै खेल जितेर शीर्ष स्थानमा छ । जापानको लय यति राम्रो छ कि, उसले ५ खेल खेलेर ५ वटैमा जित निकाल्दा विपक्षीको पोस्टमा कूल २७ गोल हानेको । तर, उसले यी ५ खेलमा १ गोल पनि खाएको छैन । जापानपछि ताजिकिस्तान ६ खेलबाट १० अंकसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।
🇲🇳 0-14 🇯🇵
🌏 Goal-hungry Japan racing clear at the top of Group F 💨 #WCQ | #WorldCup pic.twitter.com/nhQXCEToPM
प्रकाशित मिति १७ चैत्र २०७७, मंगलवार १७:१९